Ngingayigcina Kanjani indlu Yami Ngokuqothuka - I-NJ ne-NY Real Estate, i-Selectate, Ukudalulwa Kwezokuvikela kanye nabameli Bokuqothuka
Ikhaya / Blog / Ukuvikelwa Kwemboni YeNew York / Ngingawugcina Umuzi Wami Ukuqothuka
Umbuzo ojwayelekile esibuzwa kaningi uthi, “Ukuthi umuntu ohlela ukufaka imali ngenxa yokuqothuka uzokwazi yini ukugcina ikhaya lakhe.” Impendulo esheshayo yalokhu ukuthi, “Yebo. Ezimweni eziningi uzokwazi ukugcina ikhaya lakho. ”Noma kunjalo, kunezinhlobo ezahlukene zokuqothuka kwemali.
Ukuqothuka kweSahluko 13 kungayigcina kanjani Ikhaya.
Kusahluko 13, okuyisisekelo sokuhlela kabusha kwezikweletu zakho, kuvumela abaninikhaya ukuthi bagcine ikhaya labo. Ukucatshangelwa ukuthi umnini khaya uyakwazi ukufeza izidingo zokukhokha ezihambisana futhi zibekwe ohlelweni lwe-13. Ukuqothuka kweSahluko 13 kuzokuvumela ukuthi ukhokhele zonke izikweletu zakho ngohlelo lokukukhokhela isikhathi esiyiminyaka emithathu kuya kwemihlanu ngokuya ngeholo lakho. Ngaphansi kwezimo ezithile kuzodingeka ukuthi ukhokhe ingxenye yezikweletu zakho.
Imvamisa esimweni esihle kakhulu, abantu bayakwazi ukugcina izimoto zabo, kanye namakhaya kusahluko 13 ukuqothuka inqobo nje uma bezokwazi ukukhokha izikweletu zabo abazikweletayo ngenkathi beqothuka futhi baqhubeke nezimali zabo ezikhokhwayo zanyanga zonke njengoba beza.
Kukhona ngisho nezinhlobo ezithile zezikweletu ezikhishwa esahlukweni 13 ukuqothuka kwemali obekungeke kube kukhishwe kwisahluko 7 ukuqothuka. Uma unemibuzo, sicela uthinte omunye wabameli bethu bokuqothuka ukuthola zonke izidingo zakho ezithile ngaphambi kokufaka ifomu lokuqothuka mahhala. Ukwazi amalungelo akho ahlobene nesikweletu sakho nokuboleka kwakho noma ngenkathi uboniswa kusengaphambili kungakusiza ekuhambeni kwesikhathi. Lesi akusona nje isisombululo se-2019 noma i-2020 lesi yisisombululo sempilo osibhekele ukugcina ikhaya lakho.
Ngaphansi kwesahluko i-13 yokuqothuka, abakweleteli bakho kuzodingeka bathole okuningi njengoba bebenakho ngaphansi kwesahluko i-7 yokugcwaliswa kwemali yokuqothuka.
Ingabe Isahluko 7 Ukuqothuka Kungasindisa Ikhaya?
Kwisahluko 7 ukuqothuka, okuwukuphela kwamanani ezikweletu nezimpahla, kusho ukuthi ikhaya lakho lingathengiswa kuya ngokuthi kulilingana elingakanani ekhaya lakho. Ukulingana kuphathwa ngokuyisisekelo njengemali ekugcineni kosuku. Uma ungazilungiseleli ukuqothuka kwesahluko se-7 ngaphambi kokufaka, ungacelwa ukuthi uthengise ikhaya lakho esahlukweni se-7 sokuqothuka. Noma ngokuthe ngqo isigaba se-7 trustee izothengisa ikhaya lakho ukukhipha imali yakho ukulingana ukukhokhela abakweletayo. Ukuxolelwa ngokulingana kwehluka ngombuso ngamunye futhi umnini khaya uzonikezwa ukukhetha ngokuxolelwa kwe-Federal noma State.
Ukuxolelwa kombuso kuyahlukahluka ngesimo ngisho ne-County ngasikhathi. Isibonelo, eNew York, ukukhululwa kombuso yile:
I- $ 170,825 e-Bronx, Amakhosi, Nassau, New York, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, nase Westchester.
I- $ 142,350 e-Albany, Columbia, Dutchess, Orange, Saratoga, ne-Ulster, kanye
I- $ 85,400 kuzo zonke ezinye izifunda eNew York State. Bona I-CVP § 5206
ENew Jersey ukukhululwa kwenhlangano kuzuzisa kakhulu kumnini khaya kunokwehliswa isimo. Usebenzisa ukukhululwa kwenhlangano noma kwesifundazwe kuya ngesimo sakho nendawo yakho njengoba kungabonakala uma kuqhathaniswa neNew York nokuxolelwa kokuqothuka kweNew York.
Ukuxolelwa akusebenzi nje ekhaya eliyifayile yokuqothuka. Ukuxolelwa kusebenza kuzo zonke izinhlobo zempahla ngaphansi kwemithetho yokukhululwa. Abantu bayakwazi ukusebenzisa ukukhululwa emalini, imali, ubucwebe nezimali zokuthatha umhlalaphansi ukubiza izinto ezimbalwa.
Isahluko se-7 sokuchithwa kokuqothuka futhi sizokuvumela ukuthi ukhiphe imali mboleko, ukusilela kokuphindaphindeka, isikweletu sekhadi lesikweletu, isikweletu sezokwelapha. Ukugcwalisa ukuqothuka kuzophinda kumise ukuphindisela, kumise ukuhlobisa iholo, kuqedwe intela engenayo yomuntu siqu yeminyaka engu-3. Lesi akusona isixazululo sesikhashana. Kuyindlela yangempela yokulahlekelwa isikweletu. Ukuqothuka kwe-Isahluko 7 kungaba yisixazululo esingcono.
Musa ukuthatha izwi lethu ngakho, funda ukubuyekezwa okuvela kumakhasimende ethu ukuthola ukuthi iyiphi insizakalo esiyinikeze amakhasimende ethu. Ungamisa imali mboleko ephezulu, uthole ukukhululeka ezikweletini, ugcine indawo yakho ethengiswayo. Ukuhlela ochwepheshe kungakusiza ukuphatha imali mboleko yakho ephephile futhi uqinisekise ukuthi wonke ama-akhawunti akho ayanakekelwa. Uma udinga izeluleko zomthetho sizokuhamba kuzo zonke izinketho zakho.
Uyacelwa ukuthi ukhulume nommeli wesikweletu sabathengi ngaphambi kokufaka iColor 7 noma iSahluko Ukuqothuka kwe-13
Uyacelwa ukuthi ukhulume nommeli wesikweletu sabathengi ngaphambi kokufaka imali yokuqothuka ukuze uqonde ukuthi hlobo luni lwemalimboleko, kanye neminye imigqa yesikweletu onayo enokuthethelelwa esahlukweni 7 ukuqothuka noma esahlukweni se-13. Ummeli wokuqothuka angahle akhulume nawe ngaphambi kokufaka imali yokuqothuka kunasemva kokufaka imali yokuqothuka lapho kungavela khona izindaba. Akunandaba noma iyiphi inkampani oyigcinayo, noma ukuthi unemali engakanani yekhadi lesikweletu. Ukukhuluma nommeli mahhala ngeke kulimaze. Phakathi kwenani lolwazi kuthatha ukuqonda ukufaka ifayili lokuqothuka ukusindisa ikhaya kanye nenani lemininingwane emibi kuwebhu. Udinga ukufinyelela ngaphandle kwe-intanethi futhi uncike kumawebhusayithi ukwenza isinqumo esinolwazi ngamalungelo akho okusindisa ikhaya lakho.
Zonke izinketho zakho siqu kufanele kuxoxwe ngazo nommeli wethu onolwazi lokuqothuka onolwazi. Ngubani ozokwazi ukukuqondisa ngenqubo. Ukukusiza usebenzela ukufeza umgomo wakho wokugcina ikhaya lakho. Siyakwazisa ubumfihlo bakho nobumfihlo bomndeni wakho. Kuyinqubomgomo yethu ukugcina zonke izindaba zidingida nomunye wabameli bethu bokuqothuka ziyimfihlo. Ukwazi amalungelo akho asemthethweni kubalulekile. Awusoze njalo wathembela kuma-blog ama-blog noma kumawebhusayithi ezezimali ukuthola imininingwane yamanje ehlobene nomthetho wokuqothuka noma umkhuba wokubikezela umthetho.
Amathiphu Ongawacabanga Ngaphambi Kokugcwalisa Ngokuqothuka
Kunezeluleko ezimbalwa okufanele uzibheke ngaphambi kokugcwalisa a Isahluko 7:
Qonda ukuthi ikhaya lakho liphathwa kanjani. Isibonelo uma ungumnikazi wekhaya lakho njenge-Tenant-by-thetirement nomlingani wakho. Ungase ukwazi ukukhipha lonke ibhalansi yokulingana esahlukweni 7 ukuqothuka.
Yazi inani lezindlu zakho. Qondisisa ukuthi uma usuvele phambi kweningi, noma yibaphi abantu bazoqala ukunikeza lokho abakuthatha njenge "Okunikezwa Okungcono Kakhulu" ekhaya lakho, noma ngabe kungenzeka bazama ukumisa imakethe futhi bantshontshe ukulingana kwakho.
Qondisisa uma ungakwazi ukukhokhela izindleko zakho zokubolekwa kwemali. Akusilo ibhizinisi lethu ukuhlinzeka ngemininingwane abantu abafuna ukuyifaka lapha, faka ukuchaza izingcingo ezinzima abanye abantu okufanele bazenze. Iwebhusayithi yethu yenzelwe ukuhlinzeka ngolwazi, kepha kufanele ukwazi ukunikeza imininingwane ngeholo lakho ebhange lakho ukuze bakwazi ukubona uma ungakwazi ukukhokha imali oyibolekile.
Qondisisa ukuthi ukuhlala ngokuzenzakalelayo kuzovikela kanjani amalungelo akho. Ngakho-ke abakweletwayo ngeke bakulandele ngenkathi uqothuka. Ukuvikelwa kokuhlala okuzenzakalelayo kunganwebeka nakwabo obolekayo nabo.
Noma ngabe ubona sengathi awukweleti kakhulu, usenelungelo lokusebenzisa inkantolo yokuqothuka ukuze usebenzise amalungelo akho kubabolekisi bakho.
Ngenkathi lokhu okungenhla akulona uhla oluphelele lwezinkinga ezingaba khona ezingase ziqhamuke ngesikhathi sokuqothuka noma ngisho nohlu lwazo zonke izinketho ongazicabanga, Kukunika umbono wobungozi obungahle buhlotshaniswe nokugcwaliswa kwesahluko 7 ukuqothuka uma ungakwazi ukusebenzisa amalungelo akho. Akunandaba ukuthi ukweleta ini, amafemu ethu angathanda ukusiza. Kungumqondo omuhle ukuthi ube nommeli osemthethweni ngaphambi kokugcwaliswa kokuqothuka. Uma ukhetha ukungasiqashi, sincoma ukuthi useshele ummeli omuhle kakhulu wokuthola impumuzo oyidingayo.
Inani lokuba nommeli othembekile nonolwazi ngokuqothuka ohlangothini lwakho ukukusiza ukwazi ukubona inqubo esetshenzisiwe futhi ukweluleke kuzo zonke izinyathelo zendlela yakho kuphakama izindleko ezincane zokukhokhela ukumelwa ngokusemthethweni uma kukhona okungahambi kahle ngemuva kokufaka isicelo sokuqothuka. , noma uma ungenalo isu ndawonye lokukhulisa inani lekhaya lakho. Uma unemibuzo maqondana nokuthenga noma ukuthengisa ikhaya lakho sicela ushayele inkampani yami i973-200-1111 ukukhuluma ne Ukudalulwa / ummeli wokuqothuka Noma vakashela app yethu ikhalenda ukuhlela aphoyintimenti online. angaxhumana nathi nge-imeyili at [Email protected].